Microstation အကြောင်းကိုအားလုံး - egeomates
အားလုံး Microstation အကြောင်းကို
Bentley - ဤစာမကျြနှာ MicroStation အကြောင်းကိုဒီ site ထဲမှာပါဝင်သောအကြောင်းအရာများတစ်ကြမ်းတမ်းအကျဉ်းချုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာနောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်များပါဝင်သည်။
Microstation-Bentley DGN ငါ-မော်ဒယ်
Bentley Systems က Microstation အကြောင်းနှင့်
Egeomates: 30 နှစ်ပေါင်း AutoCAD နဲ့ Microstation
3D မြို့ကြီးများနှင့် GIS 2011 ၏ခေတ်ရေစီးကြောင်း
2011: ဘာကိုမျှော်လင့်ရန်: CAD ပလက်ဖောင်းများ
Bentley DGN သည်သူ၏ကိုပိုမိုလူကြိုက်များလိုလား
ငါ-မော်ဒယ် Bentley ၏အသစ်အကတိသစ္စာ
Microstation V8i, လိုအပ်ချက်
ဒါက Microstation V8i ဟုခေါ်သည်
Bentley Microstation ပစ္စုပ္ပန်အေသင် V8i
အတူတူ Bentley နှင့် AutoDesk အလုပ်
27 နှစ် Microstation
အမြောက်အများ AutoCAD / Microstation အတွက်ဖိုင်တွေကို convert
စာသားအယ်ဒီတာနှင့်အတူပြဿနာများ: Vista မှာ Microstation V8 နဲ့ Windows 7
ဖိုင်တစ်ဖိုင်၏အနိမ့်အရွယ်အစား dgn / dwg အဖြစ်
MicroStation နှင့်အတူဖွံ့ဖြိုးဆဲ VBA applications များ
မှားယွင်းနေသည် cursor, Bentley V8i
CAD: ရှေ့ဆက်ဆောင် ခဲ့. နောက်ကျော Send
Microstation V8i: Task ကို Navigation
Microstation V2009 မှ AutoCAD file တွေကိုပြောင်းလဲ 8
V8 အကျင့်ကိုကျင့်အဖြစ် Microstation လိုင်စင်
Microstation XM Installing
အလိုအလျောက်သိမ်းဆည်းရန် Microstation, ကို disable
အတော်ကြာကျမ်း Microstation နှင့် AutoCAD ၏အရွယ်အစားနှင့်ထောင့်ပြောင်းခြင်း
အဘယ်မှာရှိ Microstation များအတွက်ဆဲလ်တွေ့ရှိရန်
ဆဲလ်များ၏ AutoCAD လုပ်ကွက်ပြောင်းလဲလုပ်နည်း
Bentley Map နှင့် Microstation Geographic
8 Bentley မြေပုံ V2011i အတွက်အပြောင်းအလဲများ
Microstation Geographic, Database တစ်ခုနဲ့ link ကို
Microstation Geographic: အဆိုပါစာအုပ်အင်္ဂါရပ်
Microstation Geographic အတွက် theming အဖြစ်
, G! Bentley မြေပုံ၏အသုံးပြုမှုကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေမည့်ကိရိယာများ,
Bentley မြေပုံ, အအတူတကွ Be အဘို့ငါမြော်လင့်ခြင်း
CAD, GIS, နှစ်ဦးစလုံးသလော
ArcMap: Microstation Geographic မှတင်သွင်းသည့်ဒေတာ
Geographic: ဒေသခံတစ်ဦးစီမံကိန်းအတွက် Installing
Geographic Bentley မြေပုံထဲမှာ tools တွေကိုအဆင်ပြေအောင်
Geographic ကနေ Bentley မြေပုံမှ features တွေပြောင်းရွှေ့
Bentley မြေပုံ V8i မှပြောင်းရွှေ့ချင်
Bentley geospatial အုပ်ချုပ်ရေးမှူး, toothache
Topological ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ Microstation Geographic
Microstation Geographic နှင့်အတူချိတ်ဆက်ခြင်းလိုင်းများ
XFM တစ် Geographic စီမံကိန်းကိုတင်သွင်းခြင်း
Bentley မြေပုံ XM vrs ။ Geographic V8
Bentley မြေပုံ XM, ပထမဆုံးတွေ့ကြုံ
cadastre နှင့်မြေမျက်နှာသွင်ပြင်အဘို့အလှည့်ကွက်များနှင့် tools များ
Bentley Cadasatre: Bentley Map နှင့်ပါဝါမြေပုံနှင့်အတူကွဲပြားခြားနားမှု
နှစ်ခုဒေသများ UTM ၏နယ်နိမိတ်ပေါ်တွင်အလုပ်အဖြစ်
Bentley Cadastre, စီမံချက် Wizzard
Bentley နှင့်ရေဒါပုံရိပ်တွေများအတွက် "ထွန်းသစ်စ" နည်းပညာများ
ကွက်စာရွက်များ Download 1: 50,000 သင့်ရဲ့တိုင်းပြည်
CAD ပို့ကုန် txt ကိုသြဒိနိတ်
Sinfogeo: GIS အကွာအဝေးသင်တန်းများ
ပထဝီ Web ကိုထုတ်ဝေသူ, ကပိုမိုလွယ်ကူပုံရသည်
အဆိုပါ 151 အွန်လိုင်းနှီးနှောဖလှယ်ပွဲ
ချိတ်ဆက်အွန်လိုင်းနှီးနှောဖလှယ်ပွဲ Be 2009
ညီလာခံ: က "ပြောင်းလဲနေသော" စက္ကူပြန်ရောက်
စပိန်အတွက် Bentley Geo ကမ်းလှမ်းမှုကိုနှီးနှောဖလှယ်ပွဲ
အဖြစ် Microstation အတွက်သင်တန်းသင်ပေး
အဘယ်မှာရှိလက်စွဲ Microstation တွေ့ရှိရန်
Microstation သင်ယူ (နှင့်သင်ပေး) အဖြစ်လွယ်ကူစွာ
Bentley Systems ရဲ့အခြားထုတ်ကုန်များ
Bentley Geopak, ပထမစှဲ
DNA ကိုဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အတူတစ်ဦးက footbridge
ကုန်ပစ္စည်းနှိုင်းယှဉ် Bentley AutoDesk ကွန်ရက်မှကောက်ယူရရှိ
Excel ကိုအတူ Microstation အပြန်အလှန်
Excel ကိုကနေ AutoCAD သို့မဟုတ် Microstation မှသွင်းကုန်စားပွဲ
Microstation နှင့်အတူ Interactive မှ Excel ကိုအတွက်ဝက်ဝံနှင့်အကွာအဝေးလေးထောငျ့ကှကျ
Google Earth နှင့်အတူ Microstation ပေါင်းစည်းရေး
Google Earth ၏လမ်းမြေပုံချ
Microstation နှင့်အတူ Google Earth ကိုအပြန်အလှန်
GoogleEarth ၏ပုံရိပ်တစ်ခု Georeferencing
Google Earth တွင် georeferenced orthophotos အဖြစ်
GIS နှင့်အတူ Microstation အပြန်အလှန်
Microstation V8i WMS န်ဆောင်မှုများနှင့်အတူချိတ်ဆက်
ESRI နှင့်အတူ Proving Bentley မြေပုံအပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါ
Microstation မှသွင်းကုန် shp မြေပုံ
Bentley နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ WMS နဲ့လှိုင်း
Georeferenced မြေပုံ dwg / dgn
gvSIG: 21 CAD tools များ
DGN အတူလုပ်ကိုင်ဂလိုဘယ် Mapper,
eCADlite: Microstation မှနောက်ထပ်အခြားရွေးချယ်စရာ
Microstation - attribute တွေ, AutoCAD အလိုက်ရွေးရန်
Bentley မြေပုံ - ဒေတာ, AutoCAD မြေပုံသို့ချိတ်ဆက်ရန်
CAD software ကိုနှိုင်းယှဉ်
GIS / CAD ဖြေရှင်းချက်၏လိုအပ်ချက် pa ra ရွေးချယ်မှု
ArchiCAD, ကျောင်းသားများနှင့်ဆရာ, ဆရာမများအတွက် CAD software ကိုအခမဲ့
အားသာချက်ယူသူကို GIS ပလက်ဖောင်း?
Bentley Conferences က
... အလုပ်များ ...
အဆိုပါတျသှငျးခံရ 2009 ၏ဆုရရှိသူ
များအတွက်ဆန်ကာတင် 2009 တျသှငျးခံရ
Webinars, သင် Bentley မှာအလုပ်လုပ်ခဲ့သလား
ကျောင်းသားများအတွက် Bentley ပွင့်လင်းအမျိုးအစားယှဉ်ပြိုင်
အဆိုပါ BE ဆုပေးပွဲ၏ဆုရရှိသူ
အဆိုပါ BE ဆုပေးပွဲ၏ Semifinalists 2008
geospatial အပေါ်အစီအစဉ် 2008 BE ညီလာခံ
အဆိုပါအစီအစဉ် Baltimore အတွက်အဖုံးကိုမနိုင်
အစ္စတန်ဘူလ်ရေစနစ် geospatial ကဏ္ဍဆုကို BE ဆွတ်ခူး
AutoCAD 2012 အတွက်နယူး, အပိုင်းတစ်ခုမှာဘာလဲ
10 egeomates မတ်လ 2011
CadExplorer, ရှာ CAD ဖိုင်များနှင့် Google နှင့်အတူအစားထိုးရန်
| CAD အဆိုပါ GIS ချဉ်းကပ် GeoInformatics မတ်လ 2011
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်ကနေ ipad 2,
Geoinformatics, နောက်ဆုံးပေါ်ထုတ်ဝေ 2009
ကဲ့သို့ Google neogeographers ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဘယ်ကြောင့်
လေယာဉ်ခရီးစဉ်မှ2ကောင်းသော egeomates နှင့်အခြားသူများ
CAD / GIS အတွက် Netbook ကိုထုတ်လုပ်စမ်းသပ်
CAD ပေါင်းစည်းမှု၏နှေးကွေးသောတိုးတက်မှု - ကုန်ကျစရိတ်များ
အခမဲ့ဆော့ဝဲ၏ဦးစားပေးအကြား CAD / GIS
အများစုမှာ egeomates အပေါ် commented
အသစ်သောပုံစံနှင့်အတူ Bentley ရဲ့နှစ်ပတ်လည်ကွန်ဖရ,
AutoDesk ဖိုင်ကို browser ကိုဘွဲ့ရ
မတ်လ 2008 egeomates ပျံ
AutoCAD ကောင်းသောဆောင်တတ်၏ 2009
မြူနီစီပယ် ESRI များအတွက်အထူးနှုန်းထားများ
အသစ်က AutoCAD 2008 ကဘာလဲ?
Google Earth ကနေပုံရိပ်တွေကို download လုပ်လုပ်နည်း
Google Earth နှင့်အတူမြေပုံချိတ်ဆက်ခြင်း
"Microstation အကြောင်းကိုအားလုံး"5မှ Replies
Nilva SALETE COMELLI KAVA သူ says:
ဇွန်လ 2019 ပု
Bom DIA ။ Tenho customizadas Linhas အပေါ်dúvidas။ com quem Posso ရှင်းလင်း?
hallo, Nader ။
ဂျာ, သင် een တံခါးကို doen dit om een ​​manier သင်သည် gebruiken keyin ဖြစ်ပါတယ်။
Escel အတွက်coördinatenဦး kunt dit doen တံခါးကိုသင်အွန်လိုင်း opdracht ရာအရပျက de တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး bellen keyin ၏ vervolgens အတွက် voegen samen ။
dit artikel ik een beetje ခြေထောက် uit het ပေါက်ပြား kan အတွက်။
Teken afstanden ဗန် naar Microstation Excel ကိုအတွက် een veelhoek lagers တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး
Nader သူ says:
Microstation importeren အတွက် ik မည်မဟုတ်ပါ een bestand landmeetkundige ။ Importeren gaat goed en ik zie alle punten gemeten ။ het om er een သင် verbinden mogelijkheid gemeten aan punten elkaar လား? zodat je een soort tekening / Schets krijgt?
Bartłomiej Gieracki သူ says:
သြဂုတ်လ 2018 ပု
Gdzie możnaznaleźć Poradnik informacji lub jakiekolwiek ငါźródłoသို့မဟုတ် zastosowaniu CivilStorm'a w praktyce?
အက်ဒွပ်အီး Hale က သူ says:
ဇန်နဝါရီလ 2018 ပု
ငါလောလောဆယ် Microstation V8i ဖူးနဲ့ကျွန်မထုတ်ကုန်ကိုပြန်လည်အသက်သွင်းဖို့ကြိုးစားနေပါ၏။ ငါကွန်ယက်ဆာဗာချိတ်ဆက်ရမယ်သည်ဟုပြောဆိုခဲ့ကြောင်းနေပါတယ်။ ငါ esta လုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်ငါနေတုန်းပဲတိုင်း 15 မိနစ်ငါ၏အရေးဆွဲချွတ်ကန်ရ။